Mbola sakana goavana anefa ny hoenti-manana hahafahana miatrika fiofanana kely toy ny fiompiana kisoa matavy, ny akoho manara-penitra… Hampianarina maimaimpoana etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny mahakasika ity farany manomboka ny alarobia 22 mey ho avy izao. Haharitra dimy andro izany, ao anatin’ilay hetsika la grande braderie de Madagascar, karakarain’ny Madavision. Araka ny tafa fohy nifanaovan-dRamanantsoa Harilala, vy nahitana ity hetsika ity dia hisy ihany koa ny fampianarana ny renim-pianakaviana momba ny fahandroana akoho amin’ny lafiny rehetra na hatao rony na ritra na hatono… Hisy mihitsy ireo matihanina ho avy hampianatra, hatramin’ny atody. Tranoheva manodidina ny 230 moa no handray anjara. Ankoatra ireo entana sy kojakoja efa nahafantarana ny la grande braderie de Madagascar hatramin’izay dia ho hita mandritra ny hetsika ihany koa ireo fanomezana azo hatolotra ho an’i Neny amin’ny datin’ny 26 mey ho avy izao.